बलिउड / हलिउड Archives - Page 23 of 36 - Purbeli News
कपिल शर्माको शो बीचमै छाडेर किन हिडे शाहरुख ?
मुम्बई । बलिउडका बादशाह शाहरुख खानले कपिल शर्माको शो छाडेर हिडेका छन् । आफ्ना अपकमिंग फिल्म ‘जब हैरी मेट सेजल’ को प्रमोशनमा व्यस्त शाहरुख अभिनेत्री अनुष्का शर्मासहित कपिल शर्माको शो मा पुगेका थिए । तर, दुबै जना शुटिंग नगरेरै फर्किए । यसको कारण भने कपिल शर्मा नै हुन् । यो एक स्पेशल एपीसोड थियो । यसमा फिल्मका निर्देशक इम्तियाज अली पनि आउनेवाला थिए ।...
यी हुन् बलिउडका धनी व्यक्तिकी धनी श्रीमती, श्रीमानको २ गुणा बढी कमाई गर्छिन्
एजेन्सी । बलिउडमा सबैभन्दा धनी कलाकारको सूचिमा सबैभन्दा पहिले सुनील सेट्टीको नाम आउँछ । त्यसो त सुनिलले थुप्रै फिल्महरुमा धनी व्यक्तिको भूमिका निर्भाह गरेका छन्, त्यस वास्तविक जीवनमा उनी त्योभन्दा धनी छन् भने उनीभन्दा धनी उनकी श्रीमती छिन् । सुनीलकी श्रीमती ‘माना शेट्टी’को आफ्नो अलग पहिचान छ र सम्पति पनि । उनी एक सुपरवोमन(व्यावसायिक महिला) हुन् । ...
एजेन्सी ।बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र शाहरुख खान इम्तियाज अलीको चलचित्र ‘जब हेरी मेट सेजल’ मा देखिदैछन् । यो भन्दा पहिले किंग खानसँग दुई चलचित्रमा अभिनय गरेकी अनुष्काको यो तेस्रो चलचित्र हो । शाहरुखको बानिसँग परिचित अनुष्काले चाहे संसारको कुनै कुनामा जतिनै चिसो होस तर शाहरुख शरीर न्यानो बनाउने (बडि बार्मर) लगाउदैनन् भनेकि छन् । भारतिय एक अनलाइन...
शाहरुखले सलमानलाई यसरी दिए महंगो ‘सरप्राइज’
मुम्बई। बलिउड अभिनेता सलमान खान र शाहरुख खानबीच अहिले मित्रता बढेको छ । कुनै समय यी दुई अभिनेता एक साथ देखिएका थिएनन् । अहिले शाहरुखले सलमान खानलाई एक महंगो गिफ्ट दिएका छन् । त्यो हो सुविधायुक्त लक्जरी कार । उनले यो कार फिल्मको ‘क्यामियो’ को लागि दिएका हुन् । शाहरुख आनन्द एल रायको फिल्ममा काम गरिरहेका छन् । यो फिल्मको एक गीतमा सलमान देखा परेका छन्...
बलिउड करिअरबारे किन यस्तो भनिन् सन्नी लियोनले ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी। बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनले सधैभरी बलिउडमा काम नगर्ने बताएकी छिन् । सन् २०११ बाट बलिउडमा आफ्नो करिअर सुरु गरेकी सन्नी लियोनले सधै फिल्ममा काम गरेर बस्न रुची नभएको बताएकी छन् । सन्नीका अनुसार बलिउडमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले बलिउडबाट बाहिर निस्केर अन्य क्षेत्रमा पनि हात हाल्नुपर्छ । उनले भनेकी छिन्,‘म सधै बलिउडमा रहन्न । मलाई अन्य क्षेत्रम...